America Akanakisa Wax Museums | Absolut Kufamba
Unoda mamuseum? Izvo zvinoshamisa, chidimbu chega chega pachiratidziro chidimbu chidiki cheunyanzvi, chakadai kubereka chaiko icho chinopa kumbofungidzira. Kana iwe uchifunga kuti Madame Tussauds mamuseum anongori iwo chete, ndinokuudza kuti haasi iwo, kuti muUnited States mune akawanda mamuseum emumiyuzi.
Muchinyorwa chedu nhasi tichataura nezvacho iyo akanakisa mamuseum muAmerica, saka nyora izvo zvinokufadza parwendo rwako runotevera.
1 Wax mamuseum
2 Wax mamuseum muUnited States
3 Imba yaFrankenstein
4 Iyo Jesse James Wax Museum
6 Vakuru Vatema National Museum
7 Muumbi weWax Museum
10 National wax miziyamu yeMapurezidhendi
Ndeipi iri nhoroondo yewa wax madhora? Izvo zvese zvakatanga ne dzimba dzemariro dzemadzimambo eEurope, mukutungamira kwekugadzira saizi yehupenyu-yakakura micheka yakapfekedzwa mupfeko yemurume akafa. Uye nei ivo vaigadzira izvi zvigadzirwa? Netsika ye tsika yemariro izvo zvaireva kutakura chitunha kuenda nacho kubhokisi, mukufora uye nekudaro zvichitongwa nemamiriro ekunze asina kunaka
Ipapo pfungwa yekugadzira wakisi mufananidzo, kutanga musoro nemaoko zvaive zvikamu zvinobuda zvehembe dzeumambo. Mushure mekuviga kana kuviga, yakave tsika yekusiya zvidimbu izvi mukati kuratidzwa kwechechi, iyo yakaguma ichikwezva vazhinji vaiona. Uye tinoziva, zvese izvo zvaive nemutengo.
Gare gare, kuunza muhupenyu hweaya manhamba kwakavewo kwakakurumbira uye paive nevatenzi vechokwadi vezvivezi vaifamba nematare eEuropean vachitora makomisheni nemari. Tsika iyi yakazvarwa muEurope pakati pehumambo, asi chokwadi ndechekuti nekufamba kwenguva chakayambuka makungwa uye nhasi uno kune mamiziyamu zvakare muAmerica nepasirese, asi haasisiri chete zvikwereti asi vane mukurumbira.
Wax mamuseum muUnited States
United States ine mamuseum mizhinji, mamwe muCalifornia, mamwe muNew York, Las Vegas, Washington, uye rondedzero inoenderera nekuenderera mberi. Pano iwe unowana iwo manhamba ewakisi emarudzi ese, kubva kune mamwe zvikwereti, achipfuura vaimbi vane mukurumbira uye mavara kubva kumabhuku akakurumbira kusvika, hongu, hollywood stars vemazera ese.
Iyi miziyamu iri muLake George, New York, uye iri miziyamu yekutyisa iyo, kunyangwe iri muzita rinoreva Frankestein, kune zvimwe rinotyisa bhaisikopo uye vatambi vemabhuku izvo zvinogona kukutyisa. Iko kuunganidzwa kwakavakirwa pamabhuku echinyakare anotyisa uye pane echinyakare maficha emamiziyamu erudzi urwu, saka pane zvimwe zviitiko zvechisimba izvo zvingave zvine simba.
Vamwe vatambi vanodanidzira, vamwe vanofamba zvishoma uye vese vanotya, sezvo iri imba yezvipoko, shure kwezvose. Ino miziyamu ichiri kuvhurika mudenda asi zviri nyore kutarisa mazuva ayo nemaawa nekuti zvese zvinogona kuchinja. Panguva ino yakavhurika pakupera kwevhiki kubva 10am kusvika 5 kana 6 pm. Kubvuma kuri $ 10,75 pamunhu mukuru uye $ 9 yevana nevadzidzi vane makore gumi kusvika gumi nemanomwe.
Iyo Jesse James Wax Museum
Jesee James aive Masango ekumadokero, kunozivikanwa. Zvinonzi akafa muna 1882 asi miziyamu inomudzosera pakukwana. Iyo miziyamu ine mifananidzo, ruzivo, zvinhu zvevintage, vanopfuura zviuru zana, pakati zvinhu zvaJames nechikwata chake, zvombo zvinosanganisirwa.
Uye zvakare, vashanyi vanozoona mavhidhiyo ekubvunzurudzwa nevanhu vaiziva James uyezve, pane mifananidzo yewax inoburitsa imba yebhanditi, nguva dzeHondo Yenyika, kupamba kwake uye nezvimwe zvakawanda. Izvo ndezve kurarama hupenyu hwakawanda uye hunoratidzika kunge hwanyatsozadzikiswa.
Iyi miziyamu Iri padyo neMeramec Mapako uye iri pane imwe yenzira dzakakurumbira pasi rese, Nzira 66, painopfuura neMissouri. Zvino, kushanya kwacho kunopedziswa nekufamba kuburikidza nemapako aya akazobuda mushure memafashama akasimba muna 1941. Uye zvinoita sekunge mapako aive pekuhwanda kwechikwata cheJesse James.
Iyo miziyamu ine maawa akasiyana zvichienderana nemwedzi, asi ramba uchifunga kuti pakati paNovember naMarch yakavharwa. Kubvuma kuri $ 10 pamunhu mukuru.
Iyi miziyamu iri muMyrtle Beach, South Carolina. Ibazi uye riri kuvaraidza zvakakwana kuti uende kwechinguva usati waenda kumahombekombe uye kwaro mafaro Kune akawanda manhamba e vakakurumbira uye dzimwe zombies, vakakurumbira zvakare shure kwezvose.
Kugamuchirwa pamunhu mukuru kunodhura pakati pe $ 27 ne $ 30, asi unogona kutenga iyo All Kupfuura Pass uye unoshanyira mamiziyamu matatu mune imwe: Hollywood Wax Museum, Hana's Maze yeMirazi uye Kuputika, Dread the Undead.
Iyo miziyamu yakavhurwa mazuva ese kubva na9 mangwanani kusvika na9 manheru uye mazuva ano kushandiswa kwechigunwe kunosungirwa.
Vakuru Vatema National Museum
Iyi wax museum inowanikwa mu baltimore uye ndezve nhoroondo yevaAfrica vanoenda kuUnited States. Ruzivo rwunopihwa pano harusi kazhinji rwunodzidziswa muzvikoro uye pamusoro pekuve runodzidzisa zvikuru zvakare rwunonakidza kwazvo, semamiyuziyamu enamo anowanzo kuve.
Kune zvimwe zve Makumi zana nemakumi mashanu ehupenyu hukuru wakisi uye akati wandei emakamuri ekuratidzira emhando dzakasiyana. Imwe inonzi Iyo yepasi pechitima njanji, nenhamba dzaHarriet Tbman naThomas Garret, chimwe chikamu chinonzi Entrepreneurship uye pana Madam CJ Waler, mumwe anonzi Kodzero dzevakadzi uye kubvisa uye ine zvimiro zveRosa Parks kana Shirley Chisholm, semuenzaniso. Aya ndiwo ese mazita evatema vakaita mucherechedzo muAmerica.
Iyo miziyamu inozivikanwa ne saizi-yehupenyu mufananidzo wevaranda vanotengesa ngarava uye zvakaoma chaizvo kuona mamiriro ezvinhu akaitwa nemugwagwa iwoyo. Kugamuchirwa pamunhu mukuru kunodhura madhora gumi nemashanu uye miziyamu yakavhurwa Muvhuro, Chitatu neMugovera kubva 15am kusvika 10 pm uye neSvondo kubva masikati kusvika 5 pm. Kune mafambiro akatungamirirwa.
Muumbi weWax Museum
Iyi miziyamu anoshanda mukare chemishonga munyika, izvo zvinopa iro rakawanda. Chii chimwe, Iyo ndiyo yakare musum miziyamu muUnited States uye kune mhando dzakasiyana siyana kubva kuma centurion eRoma kusvika kune vakakurumbira vezana ramakumi maviri nemasere.
Muvambi wemyuziyamu, George Potter, akafadzwa nemadhongi ewax pakushanya kuLondon uye aida kuita zvakafanana muUnited States, asi nevezvematongerwo enyika. Saka akatenga wakisi yakanakisa muFrance, vhudzi rakanakisa muItaly, uye akabhadhara mhizha dzakanakisisa pasi rose. Kugadzira kwakaitika muBelgium uye zvese zvinhu zvakaendeswa kumuseum mu1949.
Iyo miziyamu iri mukati meNational Historic District, San Agustin, dunhu rekaresa reEurope munyika, nzvimbo inoyevedza. Iyo iri pa31 Orange St. uye yakavhurwa Muvhuro kusvika Svondo kubva 9 am kusvika 5 pm. Kubvuma kuri kutenderera $ 11.
Iyi miziyamu iri mu Salem, Massachusetts. inopemberera kusvitsa kwayo makumi maviri nemashanu gore rino uye pamwe chete unogona kushanyira zvinokwezva zveSalem Witch Village uye Trails Chirangaridzo uye zvakare Charter Street Burying Point, zvese zvine hukama ne Kuvhima varoyi.
Iyo saiti yakanyanya kukwana nekuti mukuwedzera kune iyo musimamende iwe unogona tora husiku kufamba mumigwagwa uye dzimba dzinoshanyirwa. Rwendo urwu runokurukura nhoroondo yezvivakwa, mashandiro emweya, uye kupomerwa kwehuroyi kwakawira vakadzi panguva iyoyo. Zvakare kune kushanya kwezuva.
Ehezve, kwenguva iyo iyo miziyamu yakavharwa nekuda kwedenda asi munguva pfupi kuvhurwa kwekutengeswa kwepamhepo kwetikiti kwaOctober, kunowanikwa muna Chikunguru, kuchaziviswa. Kunyangwe matikiti akatengwa e2020 achashanda.
MuSalem unogona zvakare kushanyira iyo Pirate miziyamu uye muBristol, Connecticut, iyo Mugomba Classic Movie Museum, inzvimbo huru kana iwe uchida mafirimu anotyisa, ane chaiwo manhamba e Dracula, Frankestein, Nosferatu uye Phantom yeOpera, semuenzaniso.
Iyi miziyamu iri muHollywood, California, uye panguva yacho yakavharwa. Unganidzo dzayo dzakakamurwa munzvimbo dzinoverengeka: Yemazuva ano, Hollywood Mweya, Pop uye Western Icons. Kune zvakare nzvimbo chaiyo, nzvimbo yakatsaurirwa kuma '90s, imwe yemafirimu Usashamisika 4D uye imwe yakatsaurirwa kuna Jimmy Kimmel.
Kupinda i $ 20 uye kune Hollywood Walk of Fame ine vane gumi nevashanu vanozivikanwa kutora mifananidzo. Madame Tussauds mamiziyamu zviri pasina mubvunzo anozivikanwa kwazvo saka unogona kushanyira mamwe e mahofisi ebazi Zvakanaka, kune New York, London nemamwe maguta muEurope uye zvakare muAsia.
National wax miziyamu yeMapurezidhendi
Iyi yekutanga mamuseum ino muSouth Dakota uye ine mazana emifananidzo yewakisi yemumwe neumwe wemutungamiri makumi mana nemashanu weUnited States. Iyo miziyamu iri maminetsi mashanu chete kubva paGomo reRushmore, gomo rine mukurumbira rine zviso zvemapurezidhendi mana, muguta reKeystone.
Iko kune odhiyo dhairekitori iyo inorondedzera nhoroondo yezvakaitika zvakaburitswa nenhamba, uye vhidhiyo yemaminetsi manomwe inoratidza maartist akaumba iyo wax manhamba Kune zvekare masiki erufu evapurezidhendi, nyeredzi dzezana nedzimwe nhoroondo dzezvakaitika. Iyo miziyamu yakavhurwa nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iwo akanakisa mamisiyemu muAmerica